Macron oo dib u hagaajinaya xiriirkii Faransiiska iyo Rwanda (SAWIRRO) | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Macron oo dib u hagaajinaya xiriirkii Faransiiska iyo Rwanda (SAWIRRO)
“27 sano ayaa ka soo wareegatay waqti lagu qiyaasay, 27 sano oo fahamsanaan la’aan ah iyo isku day daacadnimo iyadoo ay jirtay, haddana waxaas oo dhan waxay noqdeen waxaan lagu guuleysan. Taariikhda 27 sano oo dhibaato aan kala go’ lahayn shakhsiyan waxay ii leedahay xusuus murugo leh.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweyne Macron ayaa yiri “Iminka anagoo samaynayno is weydiin iyo xushmad dhankaga, waxaan garwaaqsaday masuuliyadeena.”
Macron oo dib u hagaajinaya xiriirkii Faransiiska iyo Rwanda (SAWIRRO) was last modified: May 28th, 2021 by Admin
War murtiyeed lagasoo saaray shirkii wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliya
Sawiro: Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha XFS oo kulan looga hadlayay Covid-19 la yeeshay mas’uuliyiinta Rugta Ganacsiga